Rikoooo.com - Ahoana no fomba hidirana amin'ny ILS FSX miaraka amin'i PA380
Ahoana ny fanaovana fidirana amin'ny ILS FSX miaraka amin'i PA380
Lahatsoratra tsy mbola novakiana • Lahatsoratra 2 • Pejy 1 of 1
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by JanneAir15 » 22 Mar 2017, 13:25
Salama! Ka tiako te hahafantatra ny fomba hampidinana ny ILS FSX miaraka amin'ny Project Airbus A380. Efa haiko ny fomba hanaovana landingira ILS any anaty fiaramanidina hafa saingy satria ny bitika an'ny Project Airbus dia somary hafa kely ka tsy azoko antoka. Nanandrana nanamboatra ILS aho tamin'io fiaramanidina io saingy tsy mandeha izany. Tamin'ny alàlan'ny fidirako tao anaty kazitaly virtoaly. Misy bokotra samihafa ve? Ary ny fiaramanidina dia ny Air France A380 VC avy amin'ity tranonkala ity. Ampianaro aho amin'ity.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 22 Mar 2017, 20:51
Marina fa ny ankamaroany aho #FlyBoeing izany andro izany (ny DC-10 sy Concorde ho roa lehibe ankoatra ny tranga miavaka LOL), nefa fantatro mila miantso ao amin'ny ILS Freq ho any Nav1, ary avy eo dia miova avy GPS ho Nav (Matetika aho no manana mafana manan-danja ho amin'izany, in My raharaha Ctrl fiovàna N). Tsy azoko tsara izany Airbus fa fantatro ny 747 (izay zavatra ny ankamaroany manidina cuz mahatonga indrindra $), koa tsy maintsy mifidy APP (fomba) mba haka azy mba hanidy ny ILS. Fa tsy hanidy ny hisosa hantsana, ka dia hanao izany gotta tanana, fa fotsiny resaka fanitsiana ny Vert hafainganam-pandeha.
Manantena aho dia manampy! MIRARY ANAO HO TSARA VINTANA!
Lahatsoratra 2 • Pejy 1 of 1